निर्वाचनको सकस सबै राजनीतिक दलमा सुरु भएको छ । निर्वाचन आफैँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै हो तर सबै राजनीतिक दल केवल जित्ने र जसरी पनि जित्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन् । योभन्दा बढी यतिबेला सत्तारूढ गठबन्धनलाई नेकपा (एमाले) र यसका नेता केपी ओलीको तुजुक झार्नु छ । सत्तामा रहँदा ओलीमा जुन खालको अधिनायकवादी चरित्र देखा परेको थियो, त्यसलाई फेरि एक पटक निर्वाचनमार्फत नागरिक मतका आधारमा परास्त गर्नु परेको छ । एमाले नेता...
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका आधारमा स्थानीय निर्वाचन लड्ने मुडमा हुनुहुन्छ र उहाँका पक्षधरहरूले उहाँकै धारणाको पक्षपोषण गरेका छन् तर सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर कोइराला भने देउवाको लाइनमा असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ र उहाँका पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यले त्यसैअनुरूप धारणा राखेका छन् । काँग्रेसका नेता...
संसद् अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बन्धक बनेको छ । संसद्लाई क्रियाशील बनाउनुको अर्थ सरकारका काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा गर्नु हो । नागरिकका चासो र सरोकारका विषयमा छलफल हुनु हो र मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्नु हो । नागरिकले एउटा सांसद छान्ने भनेको सरकार बनाउन र मन्त्री रोज्नका लागि मात्र होइन । उसले आम नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा उसका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने हो । राज्य सञ्चालन...
नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला सुरु गर्नुभयो, जतिबेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवाद जारी छ । यसलाई बहसमा होइन, विवादमा कायमै राख्न गरिएका प्रयासहरू जारी छन् । यसलाई संसद्बाट पारित गराउन अग्रसर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीको पार्टी यतिबेला प्रतिपक्षमा छ र यसबारे उसका धारणा अझै स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँँग्रेस मात्र यसका पक्षमा खुलेर उभिएको छ र अरू दल न सत्ताको लोभबाट मुक्त हुन सकेका छन्, न त सडकको राप तापबाट प्रभावित...
गोरखापत्र अनलाइन माघ १७, २०७८ सोमबार
बहसमा रहेको स्थानीय निर्वाचनको विषय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेपछि अब मत्थर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको जानकारी गराउनु भएको छ र यो पनि भन्नुभएको छ – संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने गरी मिति...
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हो ? कस्तो रहनुपर्छ ? प्रतिपक्ष यतिबेला के गरिरहेको छ ? आम नागरिकलाई थाहा छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार केपी ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै पार्टी नेताहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा उहाँको सरकार अन्ततः ढल्यो । ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । त्यसो त, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिपक्षी नेता हुने चाहना, इच्छा वा रहर केही पनि थिएन । उहाँ छँदाखाँदाको...
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पाँच वर्षदेखि गिजोलिएको छ । सडकमा रहेका साना राजनीतिक दलहरू आँखा चिम्लेर यसको विरोधमा छन् । खासगरी कम्युनिस्ट नाम जोडिएका अधिकांश दल यो सम्झौतामा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को भूत देखिरहेका छन् । भर्खरै सत्ताच्यूत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, राजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गर्ने दाउमा छ । सत्तामै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत...
नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले केही नयाँ सन्देश लिएर आएको छ । शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक सुविधाजनक हिसाबमै सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ, यद्यपि विजयी घोषणा हुन यस पटक पनि विधानको बाध्यताका कारण दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पुग्नुप-यो ।
देउवालाई हार्ने छुट छैन
नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लगभग निर्वाचित भइसकेका छन् । यो तयारीसँगै काँग्रेसको नेतृत्वको नयाँ वैधानिकताका लागि उम्मेदवारहरू पनि लगभग तयार छन् । यो महाधिवेशन तेह्रौँभन्दा धेरै अर्थमा फरक छ ।